Imibuzo Evame Ukubuzwa - Yiwu Sandro Trade Co., Ltd.
Yenza izinkinga ezivamile
Yebo ungabuza okunye
F: Ungakanani usayizi wakho wokupakisha?
Ukupakishwa kwethu okujwayelekile kungu-100pcs/opp 1000pcs/ctn 79*78*50cm isisindo: 40kg
Uyini umphumela wokukhiqiza wefekthri yakho?
Ukusebenza kahle kwethu okuphezulu kokukhiqiza ngu-100000PCS/ngenyanga.10000-15000 izingcezu, singaqeda zingakapheli izinsuku ezingu-20.> izingcezu ezingu-20000, singaqeda ezinsukwini ezingu-30.
Ungakwazi ukunikeza amasampula?Kuthiwani ngezindleko?
Amasampuli ayatholakala, futhi izindleko zesampula ngu-USD140, okuhlanganisa nokuthunyelwa.
Ingabe kungenzeka ukusekela izinsizakalo zokwenza ngokwezifiso umkhiqizo?
Yebo, siyajabula ukuhlinzeka ngokwezifiso zomkhiqizo ohlobene.Kuqashelwe ngokusemthethweni.Singenza ilogo yakho esikhwameni, futhi singakwazi nokwenza ngokwezifiso ibhokisi lombala ngokuya ngedizayini yakho.Ikhono lokuklama: Sinabaklami abangochwepheshe nemiqondo yokuklama.Singahlinzeka ngezinsizakalo ze-oda ze-ODM noma ze-OEM.
Kungani ukhethe thina?Yini inzuzo yethu?
● Ikhono lokuklama: Sinabaklami abangochwepheshe nemiqondo yokuklama.Singahlinzeka ngezinsizakalo ze-oda ze-ODM noma ze-OEM.
● Kufinyelelwe ezivumelwaneni zokubambisana nemikhiqizo eminingi eyaziwayo: Imikhiqizo eyaziwayo esibambisana nayo ihlanganisa i-Coca-Cola, i-Wal-Mart, i-ZARA, njll.
● Indawo enkulu yokugcina impahla ethunyelwa impahla: ihhovisi elingaphezu kuka-3,000 square metres, ukuthengiswa okungaphezu kuka-100 square metres, kanye ne-2,000 square metres yendawo yokugcina impahla.Abakhiqizi abangaphezu kwe-100 bazokusiza.
● Yamukela ama-oda okwenza ngokwezifiso amaqoqo amancane futhi unikeze izinsizakalo zokuqinisekisa zekhwalithi ephezulu.
● Nakuba siqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo, siyaqinisekisa ukuthi ungakwazi ukuthenga imikhiqizo ethengeka kakhulu.
● I-Niche design, imikhiqizo yokunethezeka elula.
Funda kabanzi mayelana ne-BAG
Funda Ulwazi Olwengeziwe
Okuthile Okumangalisayo Okuzayo
ASIQALE UKUKHULUMA NGEPROJEKTHI YAKHO!
[Izici zomkhiqizo]: Anti-Theft, ntofontofo, imfashini, engasindi, Amakamelo amaningi, umthamo omkhulu
[Uhlelo lokusebenza lomkhiqizo]: Isikhwama esisodwa sinezinjongo eziningi.Ingasetshenziswa njengobhaka ohambweni lwebhizinisi, isikhwama sesikole sesikole, kanye nesikhwama sebhizinisi nesikhwama sekhompyutha ohambweni lwebhizinisi.Ingaphakathi elikhulu likajosaka linikeza indawo eningi yelaptop, izincwadi ezimbalwa, amafolda, amabhokisi esidlo sasemini, kanye nezidingo zansuku zonke.
[Izimakethe ezihamba phambili zokuthumela ngaphandle]: E-Asia, e-Australasia, eMpumalanga Yurophu, eMpumalanga Ephakathi/Afrika, eNyakatho Melika, eNtshonalanga Yurophu, Ephakathi/seNingizimu Melika
[Ukupakishwa kwangaphakathi]: 1pcs/opp
[Ukupakishwa kwebhokisi elikhulu]: 100pcs/ctn
[Usayizi webhokisi eliyinhloko]: 82*82*47cm
[Isisindo sebhokisi eliyinhloko]: 45kg
Ikhono elizimele le-R&D lesigaba sokuqala
Ukunikezwa okuphephile nokwanele kwezinto zokusetshenziswa
Ithimba labadayisi be-Brailliant elinolwazi lochwepheshe nesimo sengqondo esiqotho
Ukusekelwa okuhle kakhulu kwangemva kwesevisi okusekelwe kumgomo wokuqala Wekhasimende
Isistimu yokulawula ikhwalithi eqinile enamazinga aphezulu okuhlola
Ukunikezwa okuphephile nokwanele kokuluhlazaizinto zokwakha
Funda kabanzi mayelana nezinkampani namasevisi
[Isikhathi sokulethwa]: izingcezu eziyi-1000-1500, singathumela zingakapheli izinsuku ezingama-25.> Izingcezu ezingu-2000, singathumela phakathi kwezinsuku ezingu-45.
[I-oda]: Siyakwamukela ukusithumelela uphenyo, i-imeyili yethu ithi:sale06@sandrotrade.com, inombolo yocingo kanyeWhatsApp: +86 15657865091
[Ilogo yangokwezifiso kanye nokupakishwa]: Kuvunyelwe.Singenza i-logo yakho esikhwameni, futhi singakwazi nokwenza ngokwezifiso ibhokisi lombala ngokusho komklamo wakho.
[Isampula]: Amasampuli anganikezwa, futhi izindleko zesampula ngu-USD 140, okuhlanganisa nempahla.
[Inzuzo yokuncintisana eyinhloko]:
● Ukufaneleka Kwedizayini: Siphinde sibe nomqondo womklamo othuthukisiwe, sobabili singanikeza ama-ODM kanye nama-oda we-OEM.
● Umhlanganyeli womkhiqizo odumile wakha ukwethenjwa: Umkhiqizo wethu odumile esisebenzisana nawo yi-Coca-cola, i-Adidas, i-Benz njll.
● I-warehouse enkulu yokudluliselwa kwezimpahla: Ihhovisi lethu linamamitha-skwele angaphezu kuka-3000, linendali engaphezu kuka-100 kanye namamitha-skwele angu-2000 wendawo yokugcina impahla, abakhiqizi abangaphezu kwe-100 ukukusiza ukuthi uqhubeke.
● Yamukela ama-oda amancane wesivivinyo futhi unikeze izinsizakalo zokuqinisekisa zekhwalithi ephezulu.
● Izintengo zethu zinengqondo futhi sigcina ikhwalithi yezinga lokuqala kuwo wonke amakhasimende.
●Ithambile futhi inhle.Isikhwama sesikole esinesigqoko.